China Na-eburu Iju Mmiri Ọkwọ ụgbọala, Ọkwọ ụgbọala Na-eduzi, Onye Ọkwọ ụgbọala, N'èzí Waterproof Led Driver Supplier
Nkọwa:Onye na-akwọ ụgbọ mmiri,Onye Na-ahụ Maka Ike,Ọkwọ ụgbọ ala,Ọkwọ ụgbọ mmiri na-adịghị ahụkebe,,
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n&#39;ahịa > Ọkwọ ụgbọ mmiri Iju Mmiri
Ngwaahịa nke Ọkwọ ụgbọ mmiri Iju Mmiri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Onye na-akwọ ụgbọ mmiri , Onye Na-ahụ Maka Ike suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ọkwọ ụgbọ ala R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nke Shoebox  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọ mmiri dị ugbu a na-enwu mgbe niile  Kpọtụrụ ugbu a
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nke Shoebox
Ọnụahịa otu: USD 8.5 / Piece/Pieces
FD-55H-054B, nke a na-eme maka ìhè IPa akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, ngwa ngwa ọkụ, iji rụọ ọrụ ọkụ ọkụ. Ọkwọ ụgbọ ala 55W 1800mA, na njiri elu nke 45-55W, UL, CB, CE na-erube isi, mmepụta voltage dum nke imepụta mmiri. Na nkeji dị mma maka ọkụ idei...
Ọkwọ ụgbọ mmiri dị ugbu a na-enwu mgbe niile
Isi ihe Nhọrọ ọrụ dimming : 1-10V , PWM IP67 , Kwesịrị ekwesị maka akọrọ, mmiri, mmiri ozuzo Nsochi obere, n'elu okpomọkụ, nchebe volta Enwere ike ịchọta Shiol Ahị, mkpịsị aka n'ime , maka oge dị egwu 5 afọ...
China Ọkwọ ụgbọ mmiri Iju Mmiri Ngwa
Biko, ụlọ ọrụ dị afọ 8 na-eweta ike dịịrị ndụ gị site na ịmepụta ọrụ gị, ụlọ ọrụ, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ahịa ahịa, ọdụ ụgbọelu, wdg. Ya na ọkwọ ụgbọala ya dị elu nke na-enye ngwaahịa na ngwọta ọkụ. Ekele na-achọ ịnye gị ebe nchekwa dị ala na-adịghị mma na obere ume ike. Site n'ichepụta usoro nhazi ụwa na akwụkwọ dị iche iche gụnyere EC, UL FCC na SAA, a na-ere ngwaahịa ụgbọala anyị na ụlọ ahịa ma na-ebupụ ya na ahịa dị iche iche nke mba ụwa tinyere US, UK, France, Germany, Australia, Africa, Korea nakwa.
Ngwa: Ọfụma iji mee ka mmiri ọkụ, AC100-277V, 1-1.7A Ọkwọ ụgbọala dị ugbu a maka ime ụlọ na-enweghị mmiri.
Uru: nchebe klọchi mkpirikpi, nkwekọrịta mmepụta ihe nke abụọ 2, tinyere UL / FCC / TUV / RCM / CB / CE Certified. Kwesịrị ekwesị maka ahịa Europe na North America.
Mmepụta voltagr: 24-38V / 30-42V / 36-54V
Ugbu a: 100-1750mA
Onye na-akwọ ụgbọ mmiri Onye Na-ahụ Maka Ike Ọkwọ ụgbọ ala Ọkwọ ụgbọ mmiri na-adịghị ahụkebe Onye na-akwọ ụgbọ mmiri nke 160W